महिनावारी – Menstruation Education Nepal
महिनावारी अथवा मासिक धर्म हुनु भनेको केटीहरुमा किसोरावस्थामा प्रवेश गर्दाको एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख चरण हो । यो अन्य अनेकौ लक्षणहरु मध्ये एक लक्षण हो । जसले यो बताँउछ की एउटी सानी केटी अब एक वयस्क महिला हुने प्रकृयामा छिन । महिलाहरुमा मासिक रुपमा योनीबाट हुने रक्तश्राव महिनावारी हो । जब तपाईमा महिनावारी हुन्छ त्यसबेला तपाईको पाठेघरले त्यहाँ बनेको रगतका पत्रहरुलाई बगाउन सुरु गर्छ । महिनावारीको रगत पाठेघरबाट पाठेघरको मुख तथा योनी मार्ग हुदै योनीबाट बाहिर बहने गर्छ ।
पहिलो महिनावारी भनेको के हो ?
पहिलो महिनावारी भनेको महिनावारी चक्रको पहिलो शुरुवात हो । सामाजिक तथा चिकित्सा विज्ञान दुबै दृष्टिकोणबाट यो केटीहरु किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दाको एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख चरण हो । यसले केटीहरुमा गर्भ रहनसक्ने क्षमता विकास भएको बारे पनि संकेत गर्दछ ।
के महिनावारी रोग हो ?
होईन, न त महिनावारी कुनै रोग हो न त कुनै स्वास्थ समस्या नै यो त अत्यन्त प्राकृतिक एंव स्वस्थ शारिरीक प्रकृया हो ।
के महिनावारी आशुध्ह कुरा हो ?
समाजमा प्रचलित धेरै अन्धविश्वासका कारणले गर्दा महिनावारी भएको महिला र महिनावारीको बेलामा बग्ने रगत अशुद्घ भनिएको देखिन्छ । थुप्रै बन्देज एंव निषेध गर्ने व्यवहारहरु संसार भर मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । यस्ता व्यवहार महिनावारीको वास्तविक एबं ठिक कारण थाहा नभएर विभिन्न काल्पनिक कुराहरुमा विश्वास गरी गर्ने गरेको देखिन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा महिनावारीको रगत भनेको पाठेघर भित्र बनेको रगतका पत्रहरु 〈पाप्राहरु〉 तन्तु एंव रक्तकोषिकाबाट बनेको हुन्छ । यदी डिम्बाशयबाट निस्केको डिम्ब 〈अण्डा〉 पुरुषको शुक्रकिटसंग निषेचित भएमा ती पत्रहरुले 〈पाप्राहरुले〉 उक्त निषेचित डिम्ब जुन मानव भ्रुणमा परिणत हुन्छ ,त्यसलाई पालन पोषण गर्दछ । तसर्थ तार्किक रुपमा उक्त महिनावारीमा बहने तरल 〈रगत〉 भ्रुणको जीवनको स्रोत हो । यसकारण अशुद्घ भन्दा यसमा जीवन दिनसक्ने क्षमता रहेको हुन्छ ।
महिनावारी कति दिनमा हुन्छ ?
महिनावारी २०—३५ दिनमा भएमा पनि सामान्य मानिन्छ । धेरै जसो महिनावारी २८ दिनमा हुन्छ ।